2 Kumkani 1 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Kumkani 1:1-18
1 Yaye uMowabhi+ waqalisa ukuvukela+ uSirayeli emva kokufa kuka-Ahabhi.+ 2 UAhaziya wawa+ kuthango lwegumbi lakhe eliseluphahleni+ elaliseSamariya waza wagula. Ngoko wathumela abathunywa waza wathi kubo: “Hambani, niye kubuza+ kuBhahali-zebhubhi+ uthixo wase-Ekron+ enoba ndiya kuphila na kwesi sifo.”+ 3 Ke yona ingelosi+ kaYehova, yathetha kuEliya umTishbhi+ yathi: “Vuka, unyuke uye kuhlangabeza abathunywa bakakumkani waseSamariya uze uthi kubo, ‘Kungenxa yokuba kungekho Thixo+ na kwaphela kwaSirayeli le nto niye kubuza kuBhahali-zebhubhi uthixo wase-Ekron? 4 Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Ngokubhekisele kwisingqengqelo onyuke waya kuso, akuyi kuhla kuso, ngenxa yokuba uya kufa ngokuqinisekileyo.”’”+ Wahamba ke uEliya. 5 Ekubuyeleni kwabathunywa kuye, ngoko nangoko wathi kubo: “Nibuyele ntoni?” 6 Ngoko bathi kuye: “Kukho indoda eye yasihlangabeza, yaye ithe kuthi, ‘Hambani, buyelani kukumkani onithumileyo, nize nithi kuye: “Utsho uYehova ukuthi,+ ‘Kungenxa yokuba kungekho Thixo na kwaphela kwaSirayeli le nto uthumela ukuba kuye kubuzwa kuBhahali-zebhubhi uthixo wase-Ekron? Ngoko ke, ngokubhekisele kwisingqengqelo onyuke waya kuso, akuyi kuhla kuso, ngenxa yokuba uya kufa ngokuqinisekileyo.’”’”+ 7 Waza wathi kubo: “Ibinjani imbonakalo yendoda eye yeza kunihlangabeza yaza yathetha la mazwi kuni?” 8 Ngoko bathi kuye: “Yindoda enesambatho soboya,+ ebhinqe ibhanti lethwathwa esinqeni sayo.”+ Ngoko nangoko wathi: “IbinguEliya umTishbhi.” 9 Wathumela kuye intloko yabangamashumi amahlanu kunye namashumi amahlanu ayo.+ Ekunyukeni kwayo isiya kuye, nanko ehleli phezulu entabeni. Ke kaloku yathetha kuye yathi: “Mntu kaTHIXO oyinyaniso,+ ukumkani uthethile, ‘Yihla.’” 10 Kodwa uEliya wayiphendula intloko yabangamashumi amahlanu wathi: “Eneneni, ukuba ndiyindoda yakwaThixo, makuhle umlilo+ emazulwini ukudle ukugqibe wena namashumi amahlanu akho.” Yaye kwehla umlilo emazulwini wayidla wayigqiba namashumi amahlanu ayo.+ 11 Ngoko wathumela kuye kwakhona enye intloko yabangamashumi amahlanu namashumi amahlanu ayo.+ Yathetha naye yathi: “Mntu kaTHIXO oyinyaniso, utsho ukumkani ukuthi, ‘Yihla ngokukhawuleza.’”+ 12 Kodwa uEliya wabaphendula wathetha nabo wathi: “Ukuba ndingumntu kaTHIXO oyinyaniso, makuhle umlilo emazulwini ukudle ukugqibe wena nabakho abangamashumi amahlanu.” Yaye umlilo kaThixo wehla emazulwini wayidla wayigqiba yona namashumi amahlanu ayo. 13 Waphinda wathumela intloko yesithathu yabangamashumi amahlanu namashumi amahlanu ayo.+ Kodwa intloko yesithathu yabangamashumi amahlanu yenyuka yaza yafika yaguqa phantsi ngamadolo+ phambi kukaEliya yaza yacela+ ubabalo kuye isithi: “Mntu kaTHIXO oyinyaniso, ndiyacela, umphefumlo wam+ nemiphefumlo yaba bakhonzi bakho bangamashumi amahlanu mayixabiseke+ emehlweni akho. 14 Yabona kuhle umlilo emazulwini waza wazidla+ iintloko ezimbini zabangamashumi amahlanu kunye namashumi amahlanu azo, kodwa ke owam umphefumlo mawuxabiseke emehlweni akho.” 15 Yaza ingelosi kaYehova yathetha noEliya yathi: “Yihla naye. Musa ukumoyika.”+ Ngoko waphakama waza wehla naye waya kukumkani. 16 Wandula ke wathetha naye wathi: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba uye wathumela abathunywa+ ukuba baye kubuza kuBhahali-zebhubhi uthixo wase-Ekron,+ kungenxa yokuba kungekho Thixo kwaphela kwaSirayeli ekunokubuzwa egameni lakhe? Ngoko ke ngokubhekisele kwisingqengqelo oye wenyuka waya kuso, akuyi kuhla kuso, ngenxa yokuba uya kufa ngokuqinisekileyo.’” 17 Yaye wafa,+ ngokwelizwi+ likaYehova elalithethwe nguEliya; kwaye uYehoram+ walawula esikhundleni sakhe, kunyaka wesibini kaYehoram+ unyana kaYehoshafati ukumkani wakwaYuda, ngenxa yokuba wayengenanyana. 18 Ezinye ke izinto awazenzayo uAhaziya,+ azibhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaSirayeli?
2 Kumkani 1